Nidaamka Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS - Geofumadas
Maarso, 2012 Baridda CAD / GIS, GIS kala cayncayn ah
Tani waa mid ka mid ah badeecadaha ay ku faraxsan tahay in la dhiirrigeliyo, oo ruuxii loo dhisay ayaa hadda loo diyaariyey bulshada. Waa buug sharraxaya sida loo hirgeliyo Nidaamka Macluumaadka Juqraafi ee degmada iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS.
Noocyada tifaftirka ah ee badeecadahan waxaa lagu dhisay qaab dhismeedka barnaamij lagu xoojinayo degmooyinka, kuwaas oo dhaxalkooda ku aaddan nidaaminta aan rajeynayno inaan faafinno annagoo rajeyneyna inay waxtar u yeelan doonto dalalka kale. Marka aan dadaalladaas ka dhigno dadweyne, aqoonta ayaa dimoqraadiyeyn iyo horumarin lagu sameeyay ka dib iskaashiga bulshooyinka waxbarta ee hadda matalaya meelaha lagu wadaago internetka.
Dhismaha dokumantiga waxaa ka mid ah:
Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida ay u kala sarreeyaan lakabyada iyo qeybaha Manifold GIS, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka kooban tahay mashruuca korontada ee dowladda hoose tusaale ahaan. Mawduuca u qoondeynta saadaasha xogta sidoo kale waa la soo bandhigay oo nuxurka wuxuu u qaybsan yahay qaybo:
Dhismaha SIG ee Manifold
Qaybtani waxay muujineysaa dhinacyada ugu muhiimsan ee dhismaha xogta iyo tafatirka, laga soo dejinta xogta vector ilaa dhisida xogta. Kaliya waxay ka tagaysaa hadda markaan garawsaday, abuurista qaabab mawduucyo ah oo qaabab nooc ah ah.
Dhismaha iyo hagaajinta walxaha sawirka
Miisaska iyo shaaha
Halkan, astaamaha aasaasiga ah ee howlgalka Manifold waxaa lagu muujiyay falanqaynta xogta iyo abuurista natiijooyin cusub oo laga soo wacay weydiimaha:
Marxaladdan ugu dambeysa waxaa lagu muujiyey waxa lagu sameyn karo Manifold marka la abuurayo qaabab wax soo saar. In kasta oo qaybtani gaaban tahay, oo laga tegayo abuurista adeegyada daabacaadda ee OGC, waxaa loo maleynayaa in illaa iyo hadda ay tahay aasaaska aasaasiga ah ee adeegsadaha aasaasiga ah ee 'GIS user' waxaana loo tixgeliyaa in wixii markaa ka dambeeya ay durba qeyb ka tahay mowduuca IDE. Qaybaha cutubkan ugu dambeeya waa:
Keydso qaybaha istiraatiijiga ah
Dhamaadka, sida lifaaqa, waxaa lagu daray buug astaamo ah oo soo koobaya astaamaha lakabyada loo adeegsaday tusaalaha. Halka
Waxaa dib loogu soo celiyey bulshada, si loogu adeegsado tusaale ahaan alaabooyinka nidaaminta ee dhab ahaan lagama maarmaanka u ah macnaha guud, maahan oo keliya dhismahooda laakiin sidoo kale muuqaalkooda iyo is dhexgalka geedi socodka maaraynta aqoonta dhameystiran. Waxay leedahay dhibco lagu muujiyey hab quseeya, si qofkii doonaya inuu u adeegsado uu u soo xigto isha lagu muujiyey halkaas. Jeldiga dambe wuxuu kaloo muujinayaa macnaha guud ee uu ku yaal buug-gacmeedkan, maadaama ay qayb ka tahay isu-geyn ka kooban 18 dukumiinti oo ka kooban saddex taxane ah: Farsamo, Maamulka iyo Teknolojiyada, oo jaangoynaya qaabka iyo cabbirka ka dhigaya dokumentigan ay ku jiri karto bogag badan ayaa lagu hayaa qaab keliya 54 ah.
Tusaale ahaan waxaan ku tusayaa mashruuc ka socda Koonfurta Ameerika, oo aan la wadaagay dukumintiga maalmo ka hor kaas oo ka faa'iideysanaya waxtarka qalabkan gacanta si loogu hagaajiyo baahidiisa. Had iyo jeer isticmaal Manifold GIS.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa bogga internetka ee bogga
Post Previous" Hore ESRI waxay soosaaraysaa daabacaad gaar ah si ay GIS uga dhigto mid u sahlan ardayda jaamacadda
Post Next Liiska dhoofinta ee iskuduwaha juqraafi ee Google Earth, laga bilaabo Excel, oo leh sawir iyo qoraal hodan ahNext »
Hal Jawaab "Nidaamka Macluumaadka Juqraafi iyadoo la adeegsanayo Manifold GIS"
oslu isagu wuxuu leeyahay:
editor again sudos buug gacmeedka iyo tusaale ahaan kugula kulmeen si dhakhso ah.